Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Mmachibido njem ọhụrụ maka ndị ọbịa Hawaii
Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
John de Fries, onye isi ndị njem nlegharị anya Hawaii
Ụlọ ọgwụ dị na Hawaii fọrọ nke nta ka ha jupụta, akwa ICU adịghị adị, mana ihe karịrị ndị ọbịa 20,000 ka na -abata Aloha Kwuo ụbọchị ọ bụla.
Mgbe otu afọ gbachiri nkịtị, onye isi na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -ekwu okwu ugbu a na -agba ndị ọbịa na ndị bi ebe ahụ ume ka ha nọrọ n'ụlọ ka ha ghara ime njem.
Nke a ka gọvanọ Hawaii Ige kwuputara taa.
Gọvanọ Hawaii. David Ige taa na-akpọku ndị bi na Hawaii na ndị ọbịa ka ha gbuo oge njem niile na-adịghị mkpa na njedebe nke Ọktoba 2021 n'ihi ọrịa na-adịbeghị anya, ngwa ngwa na COVID-19 nke na-ebubata akụrụngwa na akụrụngwa nlekọta ahụike steeti ugbu a.
Gọvanọ Ige kwupụtara nke a na Fraịde na nnọkọ mgbasa ozi, na -ekwupụta na, “ụlọ ọgwụ anyị na -eru oke na ICU anyị na -ejupụta. Ugbu a abụghị oge dị mma ịga Hawaii. ”
Gọvanọ Ige gbakwụnyere, "Ọ ga -ewe izu isii ma ọ bụ asaa ịhụ nnukwu mgbanwe na ọnụọgụ COVID. Ọ bụ oge dị ize ndụ ịgagharị ugbu a. Onye ọ bụla, ndị bi na ndị ọbịa, kwesịrị ibelata njem gaa naanị ọrụ azụmahịa dị mkpa. ”
Hawaii ka juputara na ndị ọbịa. Ụlọ ahịa dị ka ụlọ ahịa Ala Moana, Waikiki, na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ areụ areụ juru. A na -erepụ FLights, mana nke a nwere ike kwụsị n'oge adịghị anya.
Njem nlegharị anya bụ nnukwu ụlọ ọrụ azụmaahịa na Aloha Steeti. Mgbochi ọhụrụ maka ndị mbata njem nwere ike imebi ụlọ ọrụ a na akụnụba ya na steeti Hawaii.
N'ihe ruru 1000 ikpe COVID-19, ụlọ ọgwụ juru, njem njem anaghị adịte aka ugbu a Aloha Steeti. Ndị ikike na Hawaii na ndị ọzọ United States etinyela akụ na ụba karịa ahụike, njehie a na -egosi ugbu a - ọ na -atụkwa ụjọ. Hawaii dị ka agwaetiti nwere nnukwu nsogbu.
John De Fries, onye isi ala na onye isi ụlọ ọrụ Ndị njem nleta Hawaii chọpụtara na n'agbanyeghị na ndị mbata na ọbịbịa n'ozuzu amalitela ịbelata, dị ka ọ dị na ọdịda, ndị ọbịa kwesịrị ịtụle yigharị njem ha na Hawaii.
De Fries kwuru, "Ndị obodo anyị, ndị bi na ya na ụlọ ọrụ ndị ọbịa bụ ọrụ maka imekọ ihe ọnụ iji dozie nsogbu a." "N'ihi nke a, anyị na -adụ ndị ọbịa ọdụ na ugbu a abụghị oge kwesịrị ekwesị maka njem, na ha kwesịrị yigharị njem ha na ngwụcha Ọktoba."
Dọkịnta Elizabeth Char, onye ntụzi aka na ngalaba na -ahụ maka ahụike, kwusiri ike ịdị ngwa nke ọnọdụ dị ugbu a. Char kwuru na "mmụba nke ikpe COVID bụ n'ihi mgbasa obodo, ndị bi na -efega na mpaghara ebe na -ekpo ọkụ na -ebubata COVID n'ime ezinụlọ na obodo ha," Char kwuru. "Ọ bụrụ na ihe agbanweghị, usoro nlekọta ahụike anyị ga -enwe nkwarụ na ndị chọrọ nlekọta ahụike maka ụdị ọrịa, mmerụ ahụ na ọnọdụ niile, gụnyere ndị ọbịa anyị, nwere ike isiri ya ike inweta ọgwụgwọ ha chọrọ ozugbo."
Ndị Hawaii Network Njem Nleta Ụwa gbara ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na Gọvanọ Hawaii Ige ume ka ha mee ihe. E leghaara arịrịọ a anya ma zaghachi ya site na machibido akwụkwọ a ịjụ ajụjụ na mmemme akụkọ.
eTurboNews buru amụma na mgbochi ndị ọzọ na -abịa, na nke a bụ nzọụkwụ mbụ taa.
N'oge a, enwere mmachibido njem njem maka isi agwaetiti Hawaii niile, gụnyere agwaetiti Oahu, Kauai, Maui, Hawaii (Big Island), Molokai, na Lanai.
Nke a gụnyere mmachibido njem njem trans-Pacific chọrọ maka ndị njem niile anaghị agba ọgwụ mgbochi ugbu a n'ime United States.
N'oge a, n'ihi mmụba nke ikpe mpaghara kpatara nke Delta dị iche iche, enwere ike buru amụma na enwere ike ịmaliteghachi mmachi njem, gụnyere ule PCR maka onye ọ bụla bịarutere Aloha Kwuo steeti ka ị ghara ịpụ iche kwa ụbọchị iri.
Nnwale ugbu a bụ iwu maka ndị njem na-abụghị ọgwụ mgbochi.
N'August 10 Gọvanọ Ige nyere iwu mgbochi ọhụrụ ndị a n'ime Steeti.
Nzukọ ọgbakọ ga -abụ ihe na -erughị mmadụ iri n'ime ụlọ yana ihe karịrị mmadụ iri abụọ na ise n'èzí.
Ndị na -eri nri n'ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ socialụ socialụ ndị mmadụ ga -anọrịrị na nnọkọ na -anọpụ anya ma ọ dịkarịa ala 6 ft n'etiti otu (yana oke otu dị 10 n'ime ụlọ na 25 n'èzí); agaghị agwakọta, a ga -eyiri ihe mkpuchi ihu oge niile belụsọ mgbe ị na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụ mmanya.
Mpaghara a ga -enyocha atụmatụ maka mmemme niile ndị ọkachamara na -akwado maka ihe karịrị mmadụ iri ise, iji hụ na a ga -etinye usoro nchekwa kwesịrị ekwesị. Ndị na -ahazi mmemme ọkachamara ndị a ga -agarịrị ọkwa ma kpọtụrụ ụlọ ọrụ mpaghara ndị a tupu emume a. Achọrọ nkwado obodo maka mmemme ọkachamara maka ihe karịrị mmadụ 50.
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa kwuru na nzaghachi ọkwa a: Obi dị m ụtọ ịhụ HTA n'ikpeazụ ka ọ na -ekwu okwu. N'ụzọ doro anya, nke a bụkwa ụlọ anyị, ihe na -eme ebe a na -eme ya onwe ya. Anyị na -enyekwa ndị ọzọ na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii nkwado ka ha na netwọk anyị zuru ụwa ọnụ na ndị ọkachamara na ndị isi nọ na mba 128 na -ahazi ma na -emegharị nsogbu a dị egwu.
Jane na -ekwu okwu ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 28, 2021 na 13:57
Abụ m onye njem nleta nke ga -anọ na Maui n'izu na -abịa. Anyị na -akagbu n'ihi arịrịọ gọvanọ na nke ndị isi obodo. Ịkagbu siri ike n'ihi na ọ bụ maka ncheta afọ 50 anyị, mana anyị na -agbalị ime nke ọma. Onye na -enye ụlọ anyị jụrụ iso anyị rụọ ọrụ na agbanyeghị (anyị na -atụfu $ 7500 iji mee ihe ziri ezi). Companieslọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara njem na -aga n'ihu ịkagbu ndoputa yana nkwụghachi zuru oke gụnyere ụgbọ elu. Ọ dị anyị ka eji ya eme ihe!
Kurt ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 28, 2021 na 06:49
Kwere kpam kpam na gị Sharon! Ihu abụọ na -aga n'ihu site n'aka ekpe!
Sharon ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 26, 2021 na 16:56
Ka ọ dị ugbu a, Joe Biden na -aga n'ihu na -emeghere ọnụ ụzọ ókè anyị mepere emepe maka Covid Positive Illegals, wee na -eme mkpesa banyere Delta Variant. Ọ bụ Ihu Abụọ. Ọ bụrụ na ọ nwere mmasị n'ezie gbasara mgbasa nke Covid, ọ ga -emechi ókè anyị na Mexico.
Giblet ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 24, 2021 na 01:53
VT mechiri steeti ya nye ndị na -abụghị ndị ọbịa, gịnị kpatara HI?